ओली र दाहाल–नेपाल समूह कित्ताकाट : कुन पक्षमा को–को ? [नामावलीसहित] - Sawal Nepal
ओली र दाहाल–नेपाल समूह कित्ताकाट : कुन पक्षमा को–को ? [नामावलीसहित]
सवाल नेपाल १४ श्रावण २०७७, बुधबार ०८:२१
शीर्ष नेताहरूबीचको झगडाले चरम रूप लिएपछि सत्तारूढ नेकपामा धाँजा फाटेको छ । एकअर्काप्रति असन्तुष्टि जनाएर गुट–उपगुटको भेला गर्दै आएका नेताहरूबीच मंगलवार स्पष्ट कित्ताकाट देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी स्थगित गरिदिए ।
त्यसपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालनिकट स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री निवासभित्रै बैठक गरेर ओलीको कदमलाई अवैधानिक भनेका छन् । २ आमन्त्रित र २८ स्थायी कमिटी सदस्य उपस्थित रहेको उक्त भेलालाई दाहाल–नेपाल समूहले ‘स्थायी कमिटीको आधिकारिक बैठक’ दाबी गरेको छ । ओली समूहले भने यसलाई दाहाल–नेपाल समूहको ‘गुटको भेला’ भनेको छ ।
पार्टी एकतापछि नेकपाभित्र देखिएको यो विवाद अहिलेसम्मकै चरम हो । यसअघि कैयौंपटक नेताहरूबीच विवाद हुँदा गुटका छुट्टाछुट्टै भेला मात्र भएका थिए । ‘पार्टीको बैठक’ नै दाबी गर्दै एउटा समूहको मात्र जमघट भएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्रै असन्तुष्ट नेताहरूले ओलीको विमतिका बीच स्थायी कमिटी बैठक दाबी गर्दै भेला गर्नुले नेकपाभित्रको पछिल्लो विवाद छताछुल्ल हुन पुगेको छ । यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसके पार्टीमा विग्रह आउन सक्नेसम्मको चिन्ता नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
पार्टीका २ अध्यक्ष ओली र दाहालका पक्षरविपक्षमा लाग्ने स्थायी कमिटी सदस्यले मंगलवार स्पष्टै रूपमा आ–आफ्नो लाइन पक्डिए । गत ६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले मंगलबारसम्म बैठक सारेको थियो । बीचमा नेताहरूबीच घनीभूत छलफल गरेर निचोड निकाल्ने भनिए पनि परिस्थिति झन् बिग्रिएपछि अध्यक्षद्वय आआफ्नो समूह बलियो बनाउने ध्याउन्नमा लागे ।
प्रधानमन्त्री ओली जसरी भए पनि बैठक स्थगन गर्ने मनस्थितिमा रहेका बेला अर्का अध्यक्ष दाहालसहितको समूहले बैठक अघि बढाउने तयारी पहिलेदेखि नै गरिरहेको थियो । तर मंगलवार बिहानसम्म बैठक बस्ने/नबस्ने निश्चित थिएन । अध्यक्ष ओलीले छलफलमा बोलाउँदासमेत उही पुरानै कुरा गर्न जान्नँ भनिरहेका दाहाललाई भेट्न बैठक स्थगन गर्ने प्रस्ताव लिएर महासचिव विष्णु पौडेल बिहान ७ बजे नै उनको निवास खुमलटार पुगेका थिए ।
दाहालले आफूहरूले बैठक अघि बढाउने निर्णय गरिसकेकाले नरोकिने जवाफ दिएपछि पौडेल फर्किए । लगत्तै दाहाल पक्षीय सचिवालय सदस्यको बैठक खुमलटारमा शुरू भयो, ओली पक्षीय नेताहरूले बालुवाटारमा परामर्श गरे । साढे १० बजेसम्म छलफलमै रहेका दाहाल पक्षीय नेताहरू ‘आज जसरी पनि बैठक गर्नुपर्छ’ भनेर बालुवाटार लागे ।
त्यहीबेला प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बैठक स्थगन भएको सूचना सामाजिक सञ्जालमा राखे । ‘पार्टीका दुई जना अध्यक्षका बीच आवश्यक परामर्श र गृहकार्य गरी सचिवालयको बैठकको निर्णय र निर्देशन बमोजिम प्रस्ताव तयार गर्न बाँकी रहेको हुनाले स्थायी कमिटीको आज ११ बजे हुने भनिएको बैठक स्थगित गरिएको छ,’ थापाले ट्वीटरमा यो सूचना लेख्दा दाहाल पार्टी बैठकमा सहभागी हुन बालुवाटार जाने तरखरमा थिए ।
कतिपय स्थायी कमिटी सदस्य बैठकस्थल पुगिसकेका थिए । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूहरू बैठक स्थलमै रहेको र स्थगित भएको सूचना पाइनसकेको प्रतिक्रिया दिए । दाहाल सवा ११ बजे बालुवाटार छिर्दा केही स्थायी कमिटी सदस्यका साथ सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ पुगिसकेका थिए । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने अलि ढिलो गरी गए ।
बैठक शुरू हुनेबित्तिकै सहभागी अधिकांश नेताले स्थायी कमिटीले तय गरेको बैठकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रूपमा स्थगन गर्न नमिल्ने र बैठकमा उपस्थित हुनैपर्ने भएकाले जसरी भए पनि बोलाउन अध्यक्ष दाहालसँग आग्रह गरे । ‘हामीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्छ, यसरी एकलौटी बैठक रोक्नु हुँदैन भन्यौं,’ एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँले म त एक्लै जान्नँ भनेपछि सचिवालय सदस्यहरू नै जानुस् भनेर प्रस्ताव गरिएको हो । तर माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले ओलीलाई बोलाउन जान अस्वीकार गर्नुभयो, त्यसपछि प्रचण्ड र झलनाथ खनाल ओलीलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्नका लागि जानुभएको थियो ।’
एक्लाएक्लै छलफल गरेर भित्री सहमति गरिरहेको भन्ने आक्षेप आएपछि दाहालले ओलीसँग एक्लै भेट्न मन नगरेको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ । ओली, दाहाल र खनालबीच करिब आधा घण्टा भएको कुराकानीमा दाहाल र खनालले बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा ओलीले ‘मैले बोलाएको बैठक स्थगन गरेको छु, अर्को कुन बैठक हो, म जान्दिनँ र सहभागी हुन पनि जान्न’ भनेर जवाफ दिएपछि उनीहरू त्यही खबर बोकेर बैठकस्थलमा फर्किए ।
स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले बोलाइएको बैठक स्थगित भइसकेको र बालुवाटारमा दाहाल पक्षीय नेताहरूको भेला भएको हुन सक्ने टिप्पणी गरे । ‘बैठक गरौं भनेर अध्यक्ष दाहाल बोलाउन आउनुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूले भेला गर्नुभएकै छ, बिहान खुमलटारमा भएको तपाईंकै भेलाका कारण म यता पर्खिबसें, हाम्रो छलफल हुन पाएन,’ ओलीले दाहाललाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै नेम्वाङले भने, ‘मैले महासचिवसित सल्लाह गरेर बैठक स्थगन गरें, यहीँ बसेर यसो सल्लाह त गर्न सक्नुहुन्छ, बैठक नगर्नुस् ।’
दाहाल र खनालले पनि ओली बैठकमा आउन इन्कार गरेको बताए । ‘प्रचण्डजी र झलनाथजीले बैठक एकतर्फी स्थगन गरेर गल्ती गर्नुभयो, नियमित एजेन्डामा छलफल गरौं, हिँड्नुस् भन्नुभएछ,’ नेता मातृका यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अहिले बैठक आवश्यक नै छैन, किन जाने भनेर जवाफ दिनुभएछ ।’ दाहालले एजेन्डाअनुसारै छलफल गर्ने कुरामा आफू र ओलीका बीचमा सहमति भए पनि एकतर्फी निर्णय गरेर राम्रो नगरेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘मसँग भएको कुराअनुसार बैठक चलाउने कोभिड–१९ र सीमा विवादबारे भएको छलफलको प्रस्ताव पारित गर्ने भन्ने थियो,’ दाहालले बैठकमा भने, ‘तर उहाँले एकलौटी गर्नुभयो ।’
दाहालले बैठकलाई अनौपचारिक छलफलका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका थिए । अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यले यो असार १० गते शुरू भएको स्थायी कमिटी बैठककै निरन्तरता भएकाले औपचारिक बैठक भन्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । दाहालले ३ बजेसम्म बैठक सारेर सहमतिको प्रयत्न गरौं भनेर आफूहरूले राखेको प्रस्ताव पनि ओलीले अस्वीकार गरेको ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले आफू अहिले पनि पार्टी एकताकै पक्षमा रहेकाले संयमित हुन नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीलाई जसरी भए पनि एकताबद्ध गराउनुपर्ने र २ अध्यक्ष विभाजित भए आफू कसैको पनि पक्षमा नउभिने बताएका थिए । ‘केपी ओलीले पार्टी र सरकार चलाउन सक्नुभएन, अराजक ढंगले चल्नुभयो,’ गौतमले भने, ‘तर दुष्टदेखि दैव डराउनुपर्छ भनेर मैले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको हुँ ।’
अरू स्थायी कमिटी सदस्यले मनोमानी गरेर ओलीले ठीक नगरेको जनाए पनि सहमति र एकताका लागि थप छलफल जरुरी रहेको बताए । करीब डेढ घण्टापछि ओलीले विधानविपरीत बैठक स्थगन गरी उचित काम नगरेको निष्कर्ष निकालेर लिखित प्रस्तावका रूपमा पारित गरियो । ‘स्थायी कमिटी बैठकको मिति र समयमा यसअघिको स्थायी कमिटी बैठकले नै निर्णय गरेको थियो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधिविपरीत स्थगित भएको सूचना प्रसारण गर्नु उचित थिएन,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यो विषम परिस्थितिमा पार्टीको एकता विधि र पद्धतिलाई ध्यानमा राखी अर्का अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरी बैठक सुचारु गर्न पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।’
श्रेष्ठका अनुसार पार्टी एकताको रक्षा गर्न, पार्टीलाई विधि र पद्धतिसम्मत ढंगले अघि बढाउन र पार्टीलाई निकास दिन सबै नेतारकार्यकर्ता र सदस्यलाई आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न आग्रह गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकको यो निर्णय सुरुमा अध्यक्ष दाहालले सुनाएका थिए । तर पछि भाषा मिलेन भन्ने कुरा उठेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले त्यसलाई लिखित रूपमा उतारेर सुनाएपछि बैठकले पारित गरेको थियो ।
पार्टी महासचिव पौडेल नै बैठकमा नभएपछि अघिल्ला बैठकमा झैं निर्णय पुस्तिकामा माइन्युट लेखिएन । एउटा कागजमा निर्णय लेखियो । दाहाल पक्षीय नेताहरूले उक्त बैठकलाई असार १० कै बैठकको निरन्तरता भने पनि ओली पक्ष भने यसलाई बैठक मान्न तयार छैन । ‘उहाँहरू बैठक गर्न भनेर बालुवाटार आउनुभएको थियो,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘बैठक हुन नसकेपछि भेला गरेर जानुभयो, यसअघि खुमलटारमा हुने भेला आज बालुवाटारमा भयो, फरक त्यही हो ।’
गुरुङले अध्यक्ष ओलीसहित आफूहरूको स्पष्ट लाइन पार्टी महाधिवेशन नै भएकाले त्यसैमा सहमति गर्नु र दुई अध्यक्षले महाधिवेशन प्रस्ताव ल्याउनुको अर्को विकल्प नभएको बताए । स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले भने अध्यक्ष सधैं बैठकबाट भागेर पार लाग्न नसक्ने बताए । युवराज ज्ञवाली, वेदुराम भुसाललगायत नेताहरूले बैठकको नियमित एजेन्डामा प्रवेश गर्नुपर्ने बताए ।
दाहाल–नेपाल पक्षको बालुवाटार बैठकमा पूर्वमाओवादी धारका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा र स्थायी कमिटी सदस्यहरू लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापा सहभागी थिएनन् । स्थायी कमिटी सदस्य थापाले खुमलटार भेलामा आफूहरूलाई छुटाइएको र बैठक शुरू भइसकेपछि दाहालको सचिवालयबाट बोलाइएकाले आफूहरू बैठकमा नगएको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
बालुवाटार बैठकमा उपस्थित
रामजन्मभूमि अयोध्याका विषयमा प्रधानमन्त्रीओलीको चासो, रामनवमी पर्वमा ठूलो पूजा गरिने